Mediam-bahoaka · Avrily, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Avrily, 2018
Janoary 2022 41 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Avrily, 2018
India: Ny Fitondran'ireo Taranakà Mpanao Pôlitika
Azia Atsimo 30 Avrily 2018
"Rahoviana ny demôkrasia no tsy azo atao hoe demôkrasia? Rehefa tendrena amin'ny fomba tsy demôkratika ny filoha mitondra, ohatra. Rehefa mahakasika ny fandovam-pahefana ny 9/10 amin'ny lalàna."
Feo avy any Zimbaboe-2
Afrika Mainty 30 Avrily 2018
Lasa sehatra ho an'ny fipoahan'ny fankahalàna vehivavy voakiana be, izay niseho tao amin'ny parlemantan'i Zimbaboe tamin'ny herinandro lasa teo, ilay adihevitra manodidina ny lalàna vaovao, dia ny Volavolandalàna mikasika ny Herisetra an-Tokatrano izany.
Nepal: Fandriampahalemana Anatin'ny Limby
Nepal 30 Avrily 2018
Tokony nifanatrika noho ny fihaonany an-tampony ny firaisan'ny antoko fito sy ny Maoista tamin'ny volana Septambra, saingy tsy tanteraka izany. Nangataka fotoana fanampiny ny Praiminisitra Girija Koirala. Ankehitriny, tokony amin'ny 08 Ôktôbra no hanaovana ilay adihevitra entina handraisana fanapahankevitra.
Zimbaboe: Mampahafantatra Ilay Hetsipanoheran'ny Sendikà ny DVD Iray Navoaka An-tsokosoko
Nodarohan'ny mpitandro filaminana imbetsaka ireo mpanao fihetsiketsehana, izay nitaky ny famatsiana ARV (fanafody miady amin'ny virosy mivadika) ho fitsaboana ny VIH sy ny fisian'ny karama farany ambany indrindra ary ny fanamarinan-toerana ny vidin'ny entam-barotra fototra sasany.
Mpanolotsaina monisipaly sady mpitarika amin'ny fiarovana ny zon'olombelona novonoina tao afovoan-tanànan'i Rio de Janeiro
Amerika Latina 30 Avrily 2018
Nofidin'ny Antoko Sosialista sy Fahalalahana (PSOL) amin'ny maha-mpanolotsaina fahadimy be mpifidy indrindra ao Rio de Janeiro i Marielle Franco tamin'ny 2016, renivohitra faharoan'i Brezila ary misy mponina maherin'ny enina tapitrisa. Azo heverina ho famonoana ivelan'ny fitsarana ny famonoana azy.
Ny Harenan'ny Iraniana Sy Ny Hevitr'I Ganji
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Avrily 2018
Vao tsy ela akory no nitatitra ny Chicago Tribune fa nandà vavolombelona lehibe iray avy amin'ny Oniversiten'i Chicago ny mpitsara federaly Amerikana tamin'ny Fampiakarana fitsarana nataon'ireo olona sisa velona tamin'ilay fandarohana baomba nataon'ny Amerikana ny taona 1997 tany Jerosalema nikatsahana ny famarotana ireo zava-tsarobidy Iraniana (takelaka tranainy) tao amin'ny tahirin'ny Oniversite mba ho fanonerana amin'ny maha firenena mpiray tsikombakomba an'i Iran amin'ny asa fampihorohoroana.
Liberiàna Mpanao Gazety, Nosamborina , Voakapoky ny Fitakiana 1,8 Tapitrisa Dolara Amerikana Tao Anatin'ny Disadisa Pôlitika
Herinandro vitsy monja taorian'ny nitateran'ny FPA ilay tantara ratsin'ny LEITI, voakiana noho ilay raharaham-pitsaràna sivily ilay gazety, nahatonga ireo mpikatroka ho an'ny fahalalahan'ny gazety hino fa lasibatra noho ny tatitra nataony nanakianana ny governemanta ny FPA.
Rosia: Ny Fomba Fandraisana ireo Zeorziana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 30 Avrily 2018
Ratsy avokoa ny ankamaroan'ireo vaovao. Toa lasa mivadika resa-pôlitika hatramin'ny fanatanjahantena koa. Azon'i Anna Chakvetadze ao amin'ny foko Zeorziana ny 'Tompondakan'i Kremlin' amin'ny fifaninanana tennis, hoy ny voasoratr'i Sukhumi - manoloanà vahoaka mihiaka eso hoe ''Mandehàna any Zeorzia ry Zeorziana!''
Shina: Rava ny Sivana Lahatsary Nataon'ny Fanjakana
Azia Atsinanana 30 Avrily 2018
''Rehefa hita maty ivelan'ny efitrano fonenany tany Ruian ny tanora mpampianatra iray, famonoantena no tsoakevitra avy tamin'ny tatitry ny polisy, fa miahiahy fanafenana ny marina kosa ny fianakaviany sy ireo mpianany. Olona an'arivony maro no nidina an-dalambe ho fanoherana, ary notsenaina tamin'ny herisetran'ny polisy.''
Midika ho fiverenan'ny voronkely tiana ny lohataona ao Japan
Tontolo_iainana 30 Avrily 2018
Ho an'ny Japoney maro, andrasana isaky ny lohataona ny fiverenan'ny mpitelina, sy zavatra iainana mampanakarena ny saina.